Siyakwamukela ukusula kukaManana kodwa icala kumele liqhubeke | News24
Siyakwamukela ukusula kukaManana kodwa icala kumele liqhubeke
Durban - USekela Ngqongqoshe weMfundo ePhakeme, uMduduzi Manana, usesulile esikhundleni sakhe.
Lokhu kuqinisekiswe ngesitatimende esikhishwe ngoMgqibelo ekuseni bemubonga ngamagalelo akhe esikhundleni sakhe.
UManana usula esikhundleni sakhe kulandela isigameko sokushaya owesimame endaweni yokuqeda isizungu eCubana eFourways.
Ngemuva kwalesi sigameko, uManana wakhepha isitatimende exolisa ngalokhu okwenzeka.
Izinhlangano ezimele amalungelo abantu zikwamukele ukusula kwakhe esikhundleni kodwa zivumelana ngokuthi umthetho kumele uthathe indawo yawo.
Abesimame abahlaselwa nguManana babe nengxoxo nabe-eNCA lapho baveze khona ukuthi basakhungathekile ngalokhu okwenzeka futhi yize exolisile, lokho akwanele.
"Ukuxolisa kukodwa akwanele, kumele aboshwe abhekane nengalo yomthetho ngalokhu akwenzile," kusho uDuma owahlaselwa wuManana.